အလ်ကာအိဒဟ်(အလ်ကိုင်ဒါ)မှ မြန်မာပြည်သို့ အသိပေးကြေငြာချက် - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
Posted by ရဲဂျာ on June 9, 2012 at 5:07am in ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင် သတင်းများ
Permalink Reply by tin yaw zin on June 25, 2012 at 12:37am စောက်ကုလားတွေကိုအကုန်သတ်
Permalink Reply by phu wai on June 25, 2012 at 3:06pm kalar is kalar.kalar is not human.
Permalink Reply by စိုးလေး on June 25, 2012 at 3:23pm အော်...အေးပါလို.အရမ်းလွယ်တာဆိုတော့ ငနာတွေစစ်မဖြစ်ခင်မင်းတို.ကျည်ကုန်နေအုံးမယ် ကိုယ်.အချင်းချင်းကိုပစ်သတ်နေတာကများ
Permalink Reply by ငှက် on June 26, 2012 at 4:12am အပေါ်ကပြောကြတာတွေကောင်းတယ်ဗျာ..ရည်ရတာတွေလည်းပါတယ်..အူကိုနာနေတာဘဲ..ဟီးဟီး~~~~
Permalink Reply by သန်းလွင် on June 30, 2012 at 9:48pm ခွေးကောင်တွေလူပါးဝလိုက်တာ
Permalink Reply by kyipyarzin@gmail.com on July 1, 2012 at 6:16pm အယ် ဒီကုလားတော့နော် သေတော့မှာပဲ ဒီမှာနေတဲ့မွတ်ဆလင်တွေကကော တကယ်ပဲအဲလိုတိုင်တယ်လား လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်ပြန်လေ ဖြစ်ရင်တော့ဆယ်ယောက်တစ်ယောက်တော့အသေသတ်ပစ်မယ် အေးဆေးမနေကျဘူး သူများဆီလာနေပြီးတော့ မတရားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ဖတ်မိတဲ့မွတ်ဆလင်ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် ချစ်တဲ့သူတွေချည်းပဲကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပေါ့
Permalink Reply by မေလေး on July 2, 2012 at 4:07pm * လွန်ခဲ့သော အပတ်တွင်ဖြစ်သွားခဲ့သော ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ အစိုးရအနေနှင့် သတ်ဖြတ်သူများအား ပြန်လည်အသက်သေစေခြင်းရှိရမည်။
Permalink Reply by မေလေး on July 2, 2012 at 4:10pm * လွန်ခဲ့သော အပတ်တွင်ဖြစ်သွားခဲ့သော ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ အစိုးရအနေနှင့် သတ်ဖြတ်သူများအား ပြန်လည်အသက်သေစေခြင်းရှိရမည်။
Permalink Reply by မေလေး on July 2, 2012 at 4:16pm ခုလိုမျိုးပြောကြကြေးဆိုရင်
13. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★